အချစ်ဆိုတာ ဘဝရဲ့အဆုံးအဖြတ်မဟုတ်သေးဘူး … – Shinyoon
အချစ်ဆိုတာ ဘဝရဲ့အဆုံးအဖြတ်မဟုတ်သေးဘူး …
December 29, 2020 by Shin Yoon
ဒါကိုသိဖို့ ကျွန်မအချိန်တွေအများကြီး ဖြုန်းခဲ့မိတယ်လေ … ပျော်ရွှင်မှုတွေ မျက်ရည်တွေ အများကြီး ဆုံးရှုံးခဲ့တယ် … တစ်ချိန်ကပေါ့ မနူးမနပ်တဲ့ တစ်ချိန်တုန်းကပေါ့ အချစ်ဆိုတာကို ဘဝကြီးလိုမှတ်ပြီး ကိုးကွယ်ခဲ့ဖူးတယ်လေ နောက်ဆုံးမှ သိခဲ့ရတာဟာ အချစ်ဆိုတာ ဘဝရဲ့အဆုံးအဖြတ်မဟုတ်ဘူး
သိပ်ချစ်လှချည်ရဲ့ဆိုပြီး မပေါင်းလိုက်ရတဲ့အတွဲတွေထဲမှာ ကျွန်မ ပါခဲ့ဖူးတယ် .. ရူးခဲ့တာပေါ့ သူမှမရှိရင် ငါရဲ့ရှင်သန်မှုတွေက အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေပြီဆိုတဲ့အထိကို ရူးခဲ့ဖူးတာ အဲ့ဒီရက်တွေမှာ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ အချိန်အတော်ကြာပျောက်ဆုံးနေမိတယ်
နေလား ညလား တချို့ရက်တွေမှာ မသဲကွဲတော့ဘူး ငါ ထမင်းစားပြီးသွားပြီလား မစားရသေးဘူးလား မမှတ်မိတာတော့ဘူး … ကိုယ့်ကိုစိတ်ပူနေတဲ့သူတွေကို ကိုယ့်ကိုဖေးမနေတဲ့လူတွေကို ငါ့ကို နားလည်မပေးလိုက်တာဆိုပြီး ကိုယ့်ဒဏ်ရာကို စာဖွဲ့ရင်းသူတို့စေတနာတွေကို လျစ်လျူရှုခဲ့မိတယ်
ကျွန်မ သိပ်မှားသွားတာပဲ .. အချိန်တွေကုန်ခံ မျက်ရည်ကုန်ခံပြီးကိုယ်က ငိုကြွေးနေရပေမယ့် သူကပျော်မြူးနေတာကိုတွေ့ရတော့ ကျွန်မ ချထားတဲ့မာနတွေ ခေါင်းပေါ်ပြန်တင်လိုက်တယ် သူတောင်ပျော်အောင်နေနိုင်သေးရင် ငါလဲပျော်အောင်နေတတ်တယ်ပေါ့ …
အရင်က အတူူတူဆိုပြီးမက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းအတွက် ပြန်မက်တယ် နှစ်ယောက်အတူတူလျှောက်ဖို့တွေးထားတဲ့လမ်းကို ကိုယ်တစ်ယောက်လျှောက်တယ် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူမရှိတော့တာနဲ့ ကိုယ့်ဘဝကြီးအဆုံးသတ်သွားမယ်ထင်သွားခဲ့တာ ကျွန်မ အရမ်းကိုမှားသွားတယ်
အချစ်ဆိုတာ ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုပါပဲ … ချစ်မိလို့ရတယ် ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအချစ်ဆိုတာကြောင့်နဲ့တော့ ကိုယ့်ဘဝကို ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းဆိုပြီး လွယ်လွယ်မဆုံးဖြတ်လိုက်နဲ့ …. အချစ်ဆိုတာ ဘဝရဲ့တကယ့်အဆုံးအဖြတ်မဟုတ်သေးဘူး
အခ်စ္ဆိုတာ ဘ၀ရဲ႕အဆံုးအျဖတ္မဟုတ္ေသးဘူး …
ဒါကိုသိဖို့ ကြ်န္မအခ်ိန္ေတြအမ်ားၾကီး ျဖဳန္းခဲ့မိတယ္ေလ … ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ မ်က္ရည္ေတြ အမ်ားၾကီး ဆံုးရံႈးခဲ့တယ္ … တစ္ခ်ိန္ကေပါ့ မနူးမနပ္တဲ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းကေပါ့ အခ်စ္ဆိုတာကို ဘ၀ၾကီးလုိမွတ္ျပီး ကိုးကြယ္ခဲ့ဖူးတယ္ေလ ေနာက္ဆံုးမွ သိခဲ့ရတာဟာ အခ်စ္ဆိုတာ ဘ၀ရဲ႕အဆံုးအျဖတ္မဟုတ္ဘူး
သိပ္ခ်စ္လွခ်ည္ရဲ႕ဆုိျပီး မေပါင္းလိုက္ရတဲ့အတြဲေတြထဲမွာ ကြ်န္မ ပါခဲ့ဖူးတယ္ .. ရူးခဲ့တာေပါ့ သူမွမရွိရင္ ငါရဲ႕ရွင္သန္မႈေတြက အဓိပၸါယ္မဲ့ေနျပီဆိုတဲ့အထိကို ရူးခဲ့ဖူးတာ အဲ့ဒီရက္ေတြမွာ ကြ်န္မကိုယ္ကြ်န္မ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာေပ်ာက္ဆံုးေနမိတယ္
ေနလား ညလား တခ်ိဳ႕ရက္ေတြမွာ မသဲကြဲေတာ့ဘူး ငါ ထမင္းစားျပီးသြားျပီလား မစားရေသးဘူးလား မမွတ္မိတာေတာ့ဘူး … ကိုယ့္ကိုစိတ္ပူေနတဲ့သူေတြကို ကုိယ့္ကိုုေဖးမေနတဲ့လူေတြကို ငါ့ကို နားလည္မေပးလိုက္တာဆိုျပီး ကိုယ့္ဒဏ္ရာကို စာဖြဲ့ရင္းသူတို့ေစတနာေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့မိတယ္
ကြ်န္မ သိပ္မွားသြားတာပဲ .. အခ်ိန္ေတြကုန္ခံ မ်က္ရည္ကုန္ခံျပီးကုိယ္က ငိုေၾကြးေနရေပမယ့္ သူကေပ်ာ္ျမဴးေနတာကိုေတြ႔ရေတာ့ ကြ်န္မ ခ်ထားတဲ့မာနေတြ ေခါင္းေပၚျပန္တင္လိုက္တယ္ သူေတာင္ေပ်ာ္ေအာင္ေနနုိင္ေသးရင္ ငါလဲေပ်ာ္ေအာင္ေနတတ္တယ္ေပါ့ …
အရင္က အတူူတူဆိုျပီးမက္ခဲ့တဲ့ အိပ္မက္ေတြကို ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းအတြက္ ျပန္မက္တယ္ နွစ္ေယာက္အတူတူေလ်ွာက္ဖို့ေတြးထားတဲ့လမ္းကို ကိုယ္တစ္ေယာက္ေလွ်ာက္တယ္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူမရွိေတာ့တာနဲ႕ ကိုယ့္ဘ၀ၾကီးအဆံုးသတ္သြားမယ္ထင္သြားခဲ့တာ ကြ်န္မ အရမ္းကိုမွားသြားတယ္
အခ်စ္ဆိုတာ ဘ၀ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းေလးတစ္ခုပါပဲ … ခ်စ္မိလို့ရတယ္ ဒါေပမယ့္အဲ့ဒီအခ်စ္ဆုိတာေၾကာင့္နဲ႕ေတာ့ ကိုယ့္ဘ၀ကို ဆိုးဆိုးေကာင္းေကာင္းဆိုျပီး လြယ္လြယ္မဆံုးျဖတ္လုိက္နဲ႕ …. အခ်စ္ဆိုတာ ဘ၀ရဲ႕တကယ့္အဆံုးအျဖတ္မဟုတ္ေသးဘူး
ကိုယ်တန်ဖိုးမထားခံရခြင်းတွေကို တွေးပြီး ရင်နာနေမိတယ် …
လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထက် ပိုချစ်ခဲ့ဖူးတယ် …